Voararan’ny Fanjakana Ilay Tantara An-tsary Ho An’olon-dehibe Voalohany Indrindra tao Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2017 6:54 GMT
Tamin'ny Aprily 2008, voadona hatrany am-potony ny fahalalahana miteny sy mamorona tao Ejipta taorian'ny fangihazana ny tantara an-tsary ho an'olon-dehibe, Metro, nosoratan'i Magdy El Shafee. Nanomboka teo dia niakatra fitsarana ilay mpanoratra sy ny toniandahatsorany ary raha iny mbola variana tamin'ny adin'ny baolina kitra nampifanandrina an'i Ejipta sy Alzeria iny ny rehetra, namoaka didy ofisialy mandrara ilay tantara kosa ny fitsarana.
Hitan'ny blaogin'ny vondrona Bikya Masr ho “famelezana iray hafa ny fahalalahana miteny ao Ejipta io didim-pitsarana io satria tsy mahazo fitia amin'ny fitsarana ny mpanoratra tantara an-tsary“
Tokony ho famantarana vanimpotoana iray vaovao ao anatin'ny tantara an-tsoratra Ejipsiana ity tranga ity. Tokony ho fanehoana ny fahalalahana miteny sy ny fahamendrehan'ny mpanakanto ilay tantara an-tsary voalohany indrindra tao amin'ny firenena, Metro. Kanefa mifanohitra amin'izay no niseho satria dia lasa famantarana miavaka an'ilay antsoin'ireo vondrona mpiaro ny zo ho sivana mbola mitohy ataon'ny governemanta Ejipsiana manoloana ny zavatra afaka soratan'ny olom-pireneny izany. Tamin'ny Alahady, nanome onitra 5000 sterlina Ejipsiana ($900) an'i Magdy el-Shafei sy ny toniandahatsorany, Mohamed Sharkawi, ny fitsarana heloka bevava ao Kairo ary nangataka ny fanagihazana ilay boky taorian'ny fiampangana azy ireo ho manoratra sy manaparitaka boky, izay nahitàna fanambarana na fehezanteny heverina ho “manohitohina ny fitondrantenam-bahoaka.”
Romotra i Sarah Carr; variana tanteraka tamin'ny adin'ny baolina kitra nampifanandrina an'i Ejipta sy Alzeria ny vahoaka ka nanadino ny zava-drehetra
Androany, voararan'ny fanjakana ny tantara an-tsary voalohan'i Ejipta. Nampandoavina onitra 5000 sterlina Ejipsiana i Magdy el-Shafei sy i Mohamed Sharkawi.
Koa satria tsy Alzeriana anefa ilay mpitsara dia heveriko fa tsy nisy nanisy sira.
Diso fanantenana i Shahinaz Abdel Salam
Androany, nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny tranga “Metro“, ilay boky an-tsary mitsikera voalohany indrindra ny fitondrana ao Ejipta, mandrara ilay boky ary mampandoa onitra 5000 sterlina Ejipsiana avy an'i Magdy el-Shafei (ilay mpanoratra) sy i Mohamed Sharkawi (ilay toniandahatsoratra) ny didim-pitsarana.
Misy manafika ny fahalalahana miteny sy ny fisokafana. Inona no dikan'izany ho an'ireo famoahana lahatsoratra sy ny hoavy?
Tsy mety kivy ilay mpanoratra, Magdy El Shafee, ary manome toky fa hampakatra ny didim-pitsaràna.
Tsy manahy! Resy izahay tamin'ny fihodinana voalohany … tsy misy olana! Tsy ho resy izahay amin'ny fihodinana faharoa!